musha Kanadha Singers Celine Dion Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeCanada muimbi ane zita rezita “Mambokadzi Celine”. Our Celine Dion Ubwana Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehuduku hwake kusvika iye zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu. Kunyanya zvakadaro, mamwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva ndiye mumwe wemimhanzi yepop mimhanzi ine mukurumbira. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezvaCeline Dion's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, titange.
Celine Dion Urubhabhatidzo Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Celine Marie Claudette Dion akaberekwa musi we 30th waMarch 1968 kuCharlemagne muCanada. Akanga ari muduku pane vana 14 akaberekwa naamai vake. Therese (musha wemudzimai) uye kuna baba vake Adhemar Charles Dion (mucheki).
Celine Dion vabereki vaTherese naCharles.
Nyika yeCanada yeFrance-Canada dzinza neScotland midzi inobva kumhuri yepasi yemhuri uye akarererwa kumusha kwake kuCharlemagne. Kukura muCharlemagne pamwe chete nevanin'ina vake 13, Young Celine aive mwana anofara aigovana mumhuri yake kuda mimhanzi. Muchiedza chimwe chete ichi, aive anoshingairira chikamu cheboka remimhanzi rakaumbwa nevabereki vake nevanin'ina vake kuti vaite mumakonzati kuguta rekumusha kwavo.
Celine Dion akakurira muCharlemagne semwana anofara.
Panguva iyo Celine akange ave zera 5, akaita rake rekutanga kubuda pachena pamuchato wehama yake kwaakaimba rwiyo rwaChristine Charbonneau "Du fil des aiguilles et du coton". Iye wekuimba prodigy aishuvira kwazvo kuve mutambi uye akachengeta tariro iri mupenyu nekuimba kuvabereki vake diki piyano bhawa, Le Vieux Baril.
Celine Dion Urubhabhatidzo Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Dzidzo yaCeline inosanganisira zvidzidzo zvake kuSte-Marie-Des-Anges muCharlemagne. Paakapedza dzidzo yake yepuraimari kuSte-Marie-Des-Anges, Celine akafambira mberi kuenda kuWest Humber Collegiate muToronto kuchikoro chesekondari asi haana kupedza chikoro ichi. Kana iye haana kuenda kukoreji.
Celine Dion haana kumbopedza chikoro chesekondari, uye haanawo kuenda kukoreji.
Celine paakange ave nemakore gumi nemaviri akashanda pamwe nemunin'ina wake naamai kunyora rwiyo rwake rwekutanga "Ce n'était qu'un rêve" iro rinoshandura se "Hapana Asi Chiroto". Iyo tepi yedemo yakatumirwa nemukoma wake kuna maneja maneja Rene Angelil uyo akatamisirwa kuchema nezwi raCeline uye akazvipira kuita Celine nyeredzi.
Celine Dion Urubhabhatidzo Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Angelil akaita zvese zvaaigona kusimudzira rwiyo rwaCeline kusanganisira kutora imba yake kuti abatsire kubhadhara dambarefu rake, 'La Voix du bon Dieu' (Izwi raMwari). Iyo albham yakava yekukurumidza kurova uye yakaita Celine nyeredzi yemuno muQuebec, Canada.
VERENGA Camila Cabello Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Mutungamiri waCeline, Angelil akaita zvese zvaaigona kuti ave nechokwadi chekuti aive nebasa rakabudirira rekudya kwemasikati.
Akazotevera basa rekutanga akaona Celine achitora kuimba kwake kugona pasi rose nekukwikwidza mu1982 Yamaha World Popular Song Mutambo wakaitirwa muTokyo, Japan. Haana kungohwina mubairo wemakwikwi we "Top Performer" asi akatora menduru yegoridhe ye "Best Song" mushure mekuimba "Tellement j'ai d'amour pour toi".
Celine Dion Urubhabhatidzo Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Celine akaenderera mberi kupinda mumakwikwi uye akamisa mukurumbira wake sekuyaruka kwevechidiki munyika dziri kuNorth America, Asia, Australia neEurope. Zvisinei, iye aingova akakurumbira pakati pevanhu vaitaura chiFrench uye vaida kutora nyika yeChirungu vachitaura nekunakidza maitiro.
Celine Dion akambobata maalbum echiFrench kwenguva pfupi kuti atore nyika inotaura Chirungu nematende ake anonakidza.
Nekudaro, Celine akadzidza Chirungu kwemakore maviri uye akaburitsa rake rechirungu-dambarefu album, 'Unison' mu1990 kuNorth America. Iyo albam yakaburitswa gore rakazotevera kune iyo yepasirese yakatambirwa zvakanaka nevatsoropodzi avo vakaidaidza se "isina kunakirwa isina kushongedzwa" uye "yakanaka, yakakwenenzverwa kutanga kweAmerica".
Celine Dion's Chirungu-mutauro mutauro dhizaini, 'Unison' yakagamuchirwa zvakanaka nevatsoropodzi.
Celine Dion Urubhabhatidzo Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
1991 raive gore iro Celine akatanga nekubudirira kwake kwepasirese apo iye naPeabo Bryson vakaita rwiyo rwemusoro weDisney's animated firimu, "Runako nechikara". Rwiyo rwakagashira Celine mubairo wake wekutanga weGrammy akashandawo semutungamiriri mumwe webhuku rake ra1992 rekuzviti "Celine Dion".
"Runako nechikara" zvakamutorera Celine Dion yake yekutanga yeGrammy Mubairo weKanakisa Pop Performance neDuo kana Boka rine Vocal.
Achibatanidza mukurumbira wake mutsva, Celine akaenderera mberi nekuburitsa dambarefu 'Rudzi rweRudo Rwangu' mu1993.Album yakateverwa na 'Ngatitaure NezveRudo' iyo yaive nerudo rweballad, 'Mwoyo Wangu Uchaenderera Mberi'. Iyo track yakashanda senge rwiyo rwemusoro weiyo firimu 'Titanic' uye ndokuzove rwiyo rwekusaina rwaCeline. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Celine Dion Urubhabhatidzo Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Celine Dion ave akaroorwa kamwechete. Tinokutaurirai nezvake nezvekuroorana naye, mararamiro ehupenyu uye hukama hwehukama huripo. Kutanga, Celine haazivikanwe kuti akambotaura nomumwe munhu asati asangana nemutungamiriri wake uye murume wekupedzisira, Rene Angelil paakanga akwegura 12.
Angelil akadanana naCeline kubva panguva chaiyo yaakateerera temo yake temo uye pamusoro pemakore akabatana nehukama hwepedyo naye. Vaya vekare-vakaroorana vakachengetedza hukama hwavo hwekuvhunduka kuti vaisazobvumirwa nevakupi vakapiwa kuti Angelil ane makore 26 akakura kudarika Celine.
VERENGA Miley Koreshi Mwana Wechiitiko Nyaya Plus Untold Biography Facts
Celine nemaneja wake Angelil vaive vadikani vepachivande kusvika kuma1990.
Zvisinei, vateveri vakabvumira hukama hwavo apo Celine akabuda mumakamuri nekuzivisa Angélil "ruvara rwe [rudo] rwake" muchikamu chekutsaurira cheAlbum yake "The Colour of My Love". Vaviri ava vakaenderera mberi nekuvatana muna 1991 ndokuroora muna Zvita 1994.
Celine Dion naAngelil vakasunga banga muna 1994.
Imba yavo inokomborerwa nevakomana vatatu. Kutanga aive René-Charles Angelil (akazvarwa 25 Ndira 2001). Akateverwa nemapatya ehama - Eddy naNelson - (Akazvarwa 23rd Gumiguru 2010. Zvinosuruvarisa, Angelil haana kurarama kwenguva yakareba kuti aone mapatya achive vechidiki sezvo akafa nekenza yehuro muna Ndira 2016. Celine akaramba asina kuroorwa kubva ipapo.
Dzazvino Mufananidzo waCeline Dion nevanakomana vake vatatu.
Celine Dion Urubhabhatidzo Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Celine akaberekerwa mumhuri huru yevanhu ve16. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Pamusoro peCeline Baba: Adhemar-Charles Dion ndibaba vaCeline. Iye akazvarwa pa2nd yaKurume 1923 uye aishanda sebutcher. Charle aive anoda mimhanzi senge dzimwe nhengo dzemhuri yake uye aigara achibatsira Celine kunyora nziyo. Akararama zvakakwana kuti aone Celine achive nyeredzi yemimhanzi asati afa munaNovember 2003 ava nemakore makumi masere.
Celine Dion nababa vake Charles.
Pamusoro peCeline Amai: Therese Dion ndiamai vaCeline. Iye akazvarwa pa20 Kurume 1927 uye aishanda semuchengeti wemba. Therese ndiamai vanotsigira vanoda kuimba uye vakabatsira kurera vana vavo gumi nevaviri sevaKaturike. Aive mukadzi akatendeka kumurume wake kusvika iye abuda achienda kune yakakura kupfuura.
Celine Dion naamai vake Therese.
Pamusoro peCeline Vana vehama: Celine ane vana vaCNUMX vaakakurira kuCharlemagne. Vanin'ina vacho vose vakaroorana nevana uye vanofarira mumimhanzi. Vanosanganisira vanun'una vake: Denise, Clement, Claudette, Liette, vakakurudzira, Ghislaine, Linda, Manon naPauline. Vakoma vake vanosanganisira Michel, Jacques, Daniel naPauro.
About Celine Relatives: Kure kubva kumhuri yake yepedyo, vanasekuru vababa vaCeline vaive Joseph Charles Adelard Edouard Dion naMarie Ernestine Bariault apo sekuru vake nasekuru naamai vake vaiva Laureat Achille Tanguay naAntoinette Sergerie zvichiteerana. Pamusoro pezvo, ana babamunini, vanatete, vazukuru uye vana babamunini vane mazita vasati varova internet Sezvineiwo Celine Dion ane hukama ne Justin bieber uye Madonna se10th uye 8th cousins ​​pamwe chete.
Celine Dion ane hukama naMadonna naJustin Bieber sehama dzepedyo.
Celine Dion Urubhabhatidzo Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Celine Dion munhu anobuda ari oga anovhiringidza zvisizvo zvisiri izvo nemaitiro akanaka anoratidza. Anofarira vazhinji nokuda kwekunaka kwake uye kukwanisa kuve nekubatana nesimba rinomukomberedza.
Nezvekuzvivaraidza kwake uye zvaanoda, Celine Dion anoda kuteerera mimhanzi uye kutenga. Mune imwe nzvimbo yakasikwa, angave akave tennis kana gorofu nekuda kwezvaanofarira mumitambo yese.
Kutamba gorofu ndeimwe yaCeline Dion inofarira kunze kwemimhanzi.
Celine Dion Urubhabhatidzo Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Nemutengo unofungidzirwa wemadhora mazana matanhatu nemakumi matatu emadhora, Celine Dion anofanidza zita rake remadunhurirwa rekuti "Mambokadzi wepop" aine hupfumi hwesimba. Ane dzimba dzakakura dzakapararira muUS neCanada asi hapana anorova dzimba dzake dzemamirioni makumi maviri paJupiter Island imba muFlorida. Imba yacho ine maficha akakura kunge mapopoma uye paki yemapopoma, tenesi dare, uye imba yemuti
Celine Dion's $ 20 miriyoni inokosha imba paJupiter Island.
Iye asi asiri fan guru remotokari dzemitambo. Uyewo haafariri kuva nemotokari zhinji mugaraji rake. Pfuma yake inokosha ndeye 1995 Rolls Royce Corniche. Iyo inoshandurwa mota ine yakakwana kumhanya uye yakasarudzika inosangana nekugutsikana kwaCeline.
Celine Dion ane 1995 Rolls Royce Corniche mune yake Cars Unganidzo.
kurarama nekodhi ye "kune zvakapihwa zvakawanda, zvakawanda zvinotarisirwa", Celine ane hwaro hwake - Celine Dion Foundation - iyo inobatsira vana nemhuri dzinotambura pamwe nekutsigira akasiyana siyana masangano anobatsira. Iye zvakare anobatsira kupa mari inodiwa kurwisa chirwere chinouraya chinonzi Cystic Fibrosis.
Celine Dion Urubhabhatidzo Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Celine Dion akarerwa muKaturike uye anotenda muna Mwari. Zvisinei, anosimbisa kuti kutenda kwake kuna Mwari hakusungirike kuchechi. Mune mamwe mazwi, Celine haisi yekereke inowanikwa nguva dzose.
Celine muduku kudarika mababa ake Patrick Patrick Angélil akaberekerwa kumurume wake wekupedzisira Rene Angelilli kubva kumuchato wekare.
Patrick Angélil akura kupfuura Celine Dion nemwedzi mishoma.
Kunze kubva pakuva Artiste, Celine inobhizimisi. Ane yekambani yekugadzira mifananidzo inozivikanwa seFeeling Inc muLaval, Quebec. Mukuwedzera, ane zvinyorwa zvemahotera, chikwata chakanaka chesiku chinonzi Pure uye mutsara wekunhuwirira, Celine Dion Parfums.
Muimbi uyo akatumidzwa zita rerwiyo "Celine" ane nyeredzi paHollywood Walk of Fame pamwe neCanada Walk of Fame.
Celine Dion ane nyeredzi pane ese maCanada uye Hollywood kufamba kwekurumbira.
Ane murairo wakanaka weFrance uye anotaura Chirungu zvakanaka kwazvo. Celine anoratidzawo unyanzvi hwake hwepuroglot nekuita muchiSpain, chiJerman, uye chiJapane.
Celine Dion Urubhabhatidzo Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Video Summary
CHOKWADI KUTI: Vongai nekuverenga kwedu Celine Dion Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!